Ebumnuche 3 M na-akwado Webinar m na ReadyTalk | Martech Zone
E bu m ụzọ gosi m Njikere mgbe inwe webinar gbazee na GoToWebinar. Enwere m ndị ọbịa 3 na ngosi sitere na Denver, San Francisco, na London. Ihe karịrị ndị ọrịa 200 na ndị amara amara bịara ebe ahụ ka anyị na-egbu oge dị egwu na ọdịyo. N'ihi ya, ọ dị m mkpa ịchọta onye na-eweta ọrụ nwere ikike iji kwado mkpa nke ndị na-eweta na ndị bịara ya. Nke a bụ ebe ReadyTalk karịrị.
Onye na-enye ihe ngosi: A ReadyTalk Webinar nwere akara ntinye maka ndị na-eweta nke agbasaara ahịrị ndị bịara ya. Nke a na-enye ha ohere itinye aka na ibe ha n’egbughị oge ọ bụla n’ihi igwe mmadụ juru. Enwere ike itinye ihe mmịfe ahụ na ihe nkesa nke ReadyTalk ka onye ọ bụla na-eweta ihe wee nwee ike ịga n'ihu na ihe ngosi.
Ọrụ aka: Ọ bụrụ n’ị ga - enwe ọnụ ọgụgụ bara ụba nke ndị bịaranụ, ReadyTalk nwere ike ịnye ndị ọrụ enyemaka. Onye ọrụ a na-aza arịrịọ nkwado teknụzụ sitere na ndị na-ege ntị. Nke a na - enyere aka igbo mkpa ndị na - ege ntị na - egbochighị mkparịta ụka ahụ na ndị na - eme ihe.
Mfe ndekọ na edezi: ReadyTalk na-enye gị ohere ịdekọ ya ozugbo ịgbaso ihe omume ahụ ma wulite ya na nchịkọta akụkọ nke na-enye gị ohere idozi webinar gị ngwa ngwa wee webata weebụsaịtị gị. ReadyTalk na-eji usoro ọkọlọtọ ka ịdekọ webinar gị. Nke a pụtara na ị gaghị etinye ọtụtụ awa n'ịtụgharị usoro vidiyo nke onwe gị ka ị nwee ike iji (Ọ bụrụ na ị nọrọla na ntanetị nke webinar, ị maara oge ole nke a na-azọpụta)
Site a ahịa si ele ihe anya, na Njikere kpuchie na API dịkwa ezigbo ike ma dị njikere maka mwekota. Na akụrụngwa ahịa, ịme ihe dị ka webinars dị oke egwu ebe ọ bụ na omume yiri nke ahụ nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu ma onye ọbịa nwere ike ịghọ onye ahịa.
Ahụmịhe anyị na-emetụta site na ahụmịhe anyị na-enye atụmanya na ndị ahịa anyị. Ọ dị mkpa ka anyị nwee obi ike na teknụzụ anyị ji eji anapụta ọdịnaya siri ike anyị na-arụsi ike ike. Oh… ma ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, usoro ReadyTalk jikọtara na Salesforce:
Yana yana Eloqua:
Tags: okwugotowebinarWebinar Ahịanjikerenjikeretalk apindị ahịa
Isaac Pellerin bụ Revenue Marketer na TinderBox, Sọftụwia dị ka Ọrụ na-eme ka ọ dị mfe ịmepụta, jikwaa, na soro amụma mmekọrịta. Ọ hụrụ ezigbo akụkọ n'anya ma na-enwe ọ workingụ na-arụ ọrụ iji bulie ụzọ ụlọ ọrụ si emetụta atụmanya ha na ndị ahịa ha. Ọ kwenyere na ire ahịa na ire ahịa kachasị mma mgbe ha kesara ihe mgbaru ọsọ na usoro.
Statdash: Mee Dashboard kacha elu